Smart, Kpọtụrụ, Crossover Na-aga Mainstream! Ihe ngosi ohuru ohuru nke mba ozo
Home / blog / Smart, Kpọtụrụ, Crossover Na-aga Mainstream! Ihe ngosi ohuru ohuru nke mba ozo
2020 / 10 / 06 nhazi ọkwablog 2497 0
Kitchen Na Bath. Isi nri na isi nri.
Na ọkara nke abụọ nke afọ, ụlọ ọrụ ịsa ahụ ndị mba ọzọ amalitela ngwaahịa ọhụrụ. Site na mkpa ahụike, ọtụtụ ụlọ ọrụ iji mee ka nyocha na ime ụlọ ịsa ahụ mara mma, Kohler, wee ruo na shelf nke ọkpọkọ ọhụrụ na-enweghị kọntaktị, ụfọdụ ụlọ ọrụ malitere ụlọ mposi iji chọpụta ugboro ugboro nke ngwaahịa ahụike. Tụkwasị na nke ahụ, ngwaahịa ụlọ ịsa ahụ na-egosi njirimara dị oke oke, dị ka ngwakọta nke ụlọ ịsa ahụ na oche nke ụlọ ọrụ malitere, ụfọdụ ụlọ ọrụ ga-egwu oche ime ụlọ ịwụ n'ime tebụl mgbakwasa. Site na ngwaahịa ọhụrụ ndị a, ọ dị ka ngwaahịa ụlọ ịsa ahụ na-adịwanye elu-ọgbara ọhụrụ na enyi na enyi, ma na-arụ ọrụ dị ukwuu na ndụ ụlọ.
Blọ ịsa ahụ nwere ọgụgụ isi
Ndị na-abụghị kọntaktị itinye n'ọkwa foset
Ọrịa neo-pneumonia ebutela ohere ọhụụ nke ohere mmepe maka ngwaahịa ịsa ahụ na-enweghị kọntaktị, na afọ a Kohler amalitelakwa eriri mmiri na-enweghị kọntaktị, "Mayak Household Sensor Faucet", nke enwere ike iji aka na-enweghị aka maka ịsa aka. isi nri na ihicha ụlọ. Site na mmetụta mmetụta uche ya, mmiri na-apụta site na iji aka dị mfe, yana oge nke nkeji anọ, enwere ike iji ya saa aka na usoro nhicha "nzọụkwụ asaa". Ngwaahịa a na-eche echiche dịkwa mfe ịwụnye, nwere ọtụtụ ụdị dị na ọ dịghị mkpa ịme oghere ndị ọzọ na bezin ahụ, ọ dịghịkwa mkpa idobe ikike iji rụọ ọrụ na-adịte aka na batrị AA5.
Enwere ike iji sistemụ a rụọ ọrụ n'ọtụtụ ngwaahịa, ndị ọrụ nwere ike ịgwa ọkpọ ahụ ka ọ gbanye mmiri, mgbe ahụ mmiri ga-amalite igba, na mgbe ị na-eji ncha, ọkpọkọ ahụ ga-agbanyụ na-akpaghị aka maka sekọnd 20, wee gbanye ọzọ maka 10 sekọnd mgbe ịchọrọ iwepụ mmiri. Itucha. Na mgbakwunye, onye ọrụ ahụ nwere ike ịrịọ arịrịọ a kapịrị ọnụ dịka "Wụsara m otu iko mmiri" na ọkpọkọ mmiri ga-eme ya na akpaghị aka.
Hingsa Ahụ Maka Blọ ịsa ahụ dum
TOTO malitere ngwa ime ụlọ ịwụ maka ahịa ndị Japan na Septemba 1, na-akwado ngwaahịa ndị enwere ike ịrụ ọrụ site na ngwa a na-eso ya, dị ka iji ngwa iji chịkwaa okpokoro ịwụ ahụ ka ọ dị ọcha n'onwe ya tupu ịla, na-agbanye ọkụ na-ekpo ọkụ n'oge, na-agbapụta mmiri mmalite, wdg, yana ịtọ ntọala arụmọrụ a ga-arụ na akpaghị aka n'oge ụfọdụ. A na-akọ na ọtụtụ usoro ụlọ ịsa ahụ TOTO nwere ike ịchịkwa APP ma ọ bụ njikwa ntanetị kwekọrọ.
NITTO CERA, ụlọ ọrụ ụlọ ịsa ahụ ndị Japan, adịbeghị anya ewepụtara ngwa ahịa amamịghe akpọrọ "omu", nke a ga-etinye ya na tankị mposi iji mata mmiri mmiri nke mposi ahụ wee gosipụta na ngwa mkpanaka ahụ n'oge. Iji jiri ngwa ahụ, ịkwesịrị ịwụnye ngwa ahụ na ekwentị gị na ekwentị gị, yana ekwentị ndị mụrụ gị dị ka onye na-ebugharị ya na ekwentị gị dịka onye nnata. Ngwaahịa ahụ na - ewepụta akụkọ ntolite mposi iji gosipụta oge ole mmadụ jiri mposi, yana ịkọtara onye ọrụ na njedebe ụbọchị banyere otu ụbọchị si gaa.
Ọdịmma Smart Activation ịsa
Grohe Smart n'ọrụ aka aka ya dị mfe ịgbanwe n'etiti ume mmiri ozuzo na-enye ume ọhụrụ, Smart relaxated na Radical na njikwa na azụ, ma dị na 130mm ma ọ bụ 150mm nha. Maka mmiri ozuzo na mmiri, ọrụ mkpọchi ngwa ngwa nke Grohe na-egbochi gị ịmị mmiri ọzọ, obere nkọwa ga-eme ka ahụ dị gị mma.
Nebia ịsa ahụ sistemụ
Moen's Rainshower System nke eweputara n'oge na-adịbeghị anya, nke na-eji teknụzụ eji eme ihe patented iji mepụta mkpuchi mmiri ugboro abụọ site na atomization, nwere ike ịchekwa ihe ruru 45% nke mmiri ma e jiri ya tụnyere igwe mmiri. Ndị ọrụ nwere ike ịmegharị mmiri ịsa ahụ elu na ala iji dabaa ogo dị elu na ịsa ahụ dị iche iche, na oghere jet dị na mgbidi na-enye ahụmịhe yiri spa. Ngwaahịa a bụ ihe dị mma na gburugburu ebe obibi ma na-elekwasị anya n'ụdị, yana ọdịdị okirikiri nke nwere teknụzụ na ọdịnihu, na-eme ka ahụmịhe ịtọ ụtọ na-atọ ụtọ karịa ịsa ahụ ọdịnala ọdịnala.
Bathroomlọ ịsa ahụ ịsa ahụ nke America bụ Bradley n'oge na-adịbeghị anya malitere ngwaahịa na-agwakọta ncha, ịsa aka na ọrụ ihicha n'otu, wee kpọọ ya WashBar. Arụ ọrụ ọ bụla nwere akara ngosi kwekọrọ na akara ngosi LED, yana mkpokọta ya, na-eweta echiche zuru ezu nke teknụzụ.
BOZZ Series Foset
Kludi akwalitewo ụdị BOZZ dị iche iche nke afọ a, na-edozigharị usoro ndị dị mfe na usoro nke kpochapụla iji mezuo nhazi na slimming. A na-enweta pọmpụ mmiri dị elu atọ iji jikọta efere dị iche iche, ebe mgbatị ahụ dị gịrịgịrị nke na-eme ka mgbidi dịkwuo mma na-eme ka ikuku mara mma nke oghere na ụdị ndụ. Nchịkọta BOZZ ọhụrụ ahụ nwere ihu ojii matte obsidian nwere ederede dị nro na ngwugwu matte na-ezobe ọkụ dị jụụ, na-eweta mmetụta nke ihe omimi na ịhụnanya.
Nnukwu mkpokọta Central Park West
Kallista, akwa mmiri nke Kohler na - ebupụta mkpokọta "Central Park West" na mgbụsị akwụkwọ, nke gunyere ihe niile site na pọmpụ mmiri ruo na pendants. Ndị na-ese ihe jiri ụma kpochapụ nkọwa sitere na ihe ndị mere eme, dị ka mmalite ngwaahịa nke narị afọ nke 20, ma gbanwee ha ka ha daba na nchịkọta ahụ. Akwụkwọ ozi C na H, nke na-anọchite anya mmiri ọkụ na mmiri oyi, gbasapụrụ na aka abụọ ahụ iji mesie ike na nkọwa.
Ndi na asa-akwa, Kabinet
Antheus ụlọ ịsa ahụ Cabinets
Villeroy & Boch adịbeghị anya tinyela usoro ụlọ ịsa ahụ Antheus, nke bụ ụdị ụdị ụdị Bauhaus na-elekwasị anya na ịdị mfe na ịdị irè. N'otu oge ahụ, ọ bụ ngwaahịa na-eme ka okomoko nwee obi ụtọ, na-enye nnukwu ikike, ebe nchekwa dị iche iche, nke nwere ike ịchekwa ọla, ihe ịchọ mma na ihe ndị ọzọ. Na mgbakwunye na oche ime ụlọ ịwụ, nchịkọta Antheus gụnye nsị, ụlọ mposi na enyo.
N'otu oge, mgbe agụụ ụlọ omenala na-agba ụwa, German ụlọ ịsa ahụ ika HEWI weghachiri echiche ọhụrụ banyere ịhazi ụlọ ịsa ahụ, na-ebupụta ngwaahịa bekee dị iche iche. Ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ ngwa dịka mkpa onye ọ bụla si dị, gụnyere akwa nhicha ahụ, brackets, wdg, iji hụ na ihe ndị a na-ahụkarị dị nso. Na mgbakwunye, ụdị ebughibu nke bezin ahụ bụ akụkụ bụ isi nke ngwaahịa a.
Housetec, ụlọ ọrụ kichin na ụlọ ịsa ahụ Japanese, amalitelarị MK Series, ngwaahịa na-agwakọta tebụl kichin na ụlọ ịsa ahụ n'otu, na-enye ndị ọrụ ohere ịnụ ụtọ ntụsara ahụ ọbụlagodi na obere oghere. Ngwaahịa ọhụrụ ahụ na-enyekwa nhọrọ ndị ọzọ ịhazi, dị ka igbe enyo ma ọ bụ shelf maka obere ihe. Ọnụ ụzọ ndị ahụ dịkwa na agba dị iche iche iji kwado ebe kichin ma ọ bụ ebe ịsa ahụ dị iche iche.
Lodloyd athlọ Bath Cabinet
Bravat ụlọ ịsa ahụ ọhụrụ ngwaahịa malitere na 2020, ọdịdị nke grunge isi awọ isonyere nkukota agba gold edo edo, mara mma na-enweghị ida ejiji. Usoro na nnabata siri ike na ụkpụrụ gburugburu ebe obibi nke mba E1, a na-eme kabinet ahụ ọtụtụ osisi siri ike, ọgwụgwọ ọgwụgwọ melamine, nke nwere ike ịgbatị ndụ nke ụlọ ịsa ahụ woodwork; mgbidi-n'ịnyịnya ukwu kabinet overhanging imewe, dịpụrụ adịpụ mmiri ohere, mfe mop n'ala; 1250 degrees elu okpomọkụ ceram firing bezin, glaze dị ọcha na-eji ire ụtọ, adịghị mfe ntụpọ; nkọwapụta dị oke nkenke enyo enyo doro anya, jiri akọ were oghere dị n’azụ enyo ahụ, nchekwa na-agbanwe agbanwe, ọmarịcha ma dozie.
S400 usoro Suites
Ihe owuwu ndị Japan dị mma n'ịmepụta ịma mma na-enweghị atụ site na iji ìhè na onyinyo eme ihe n'ụzọ aghụghọ, na INAX Inax S400 usoro nke oke ime ụlọ na-eweta nka a na ime ụlọ ịwụ ahụ. Toiletlọ mposi ahụ bụ nke teknụzụ seramiiki nke INAX Inax pụrụ iche nke “Water Poselin Super Clean” pụrụ iche, nke nwere ebe dị larịị, nke na-eguzogide ọkọchị iji gbochie nguzobe na ntụpọ, ma chọọ naanị nhicha dị mfe kwa ụbọchị, yabụ ọ nwere ike ịcha dị ka ọhụrụ; nhazi nke bezin ahụ na-eme ka akụkụ nke “akụkụ obi mmadụ” dị obosara na gburugburu. “, Na-eke nkuku gburugburu, na-eme ka nchekwa nke ime ụlọ ịwụ ahụ dịkwuo mma; usoro ịsa ahụ nwere mmiri na-agba mmiri na aka aka ya, ọdịdị nke ngwe dị nro na ntakịrị esemokwu, dị mfe iji, na-achịkwa ọkpọkọ mmiri, ị nwere ike ịhazigharị ọnụọgụ mmiri na ọnọdụ okpomọkụ. Pịa ebe a maka nkọwa ndị ọzọ: S400 Suite - Ngwakọta nke ọkụ na onyinyo.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, Lixil na-akwagharị ụlọ mposi SATO maka ahịa ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na Africa iji nyere ndị nọ na mpaghara ndị a aka nsogbu ụlọ mposi ha. N'afọ a, Lixil na-ewukwasị ihe ịga nke ọma na ọkpọka SATO, nke enwere ike ịtụle dị ka ebe a na-asacha aka akwụkwọ nwere oghere maka ncha n'otu akụkụ, ihe na-ezo aka na ọnya neo-coronary pneumonia nke Lixil kwuru nwere ike igbochi ya site na iji aka na-ehicha aka. ncha na izoputa ihe odide UNICEF na pacenti iri ano n’uwa n’enweghi ebe eji asa aka. Amalitere ngwaahịa a.
Nke gara aga :: E Nwere Ihe A Ga-Kwuru Maka athlọ Miri Miri Miri! Ị ma nke mere? Osote: Nhọrọ a nke athlọ ịsa ahụ, akwala ụta maka ịzụta ya!